२. परमेश्‍वर देखा पर्नु र उहाँको काम | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
२. परमेश्‍वर देखा पर्नु र उहाँको काम
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४६
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४७
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४८
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४९
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५०
राज्यका राजा, सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर देखिनुभएको समयदेखि परमेश्‍वरको व्यवस्थापनको क्षेत्र सारा ब्रह्माण्डमा त्यसको पूर्णतामा प्रकट भएको छ। चीन देशमा मात्र परमेश्‍वर देखा पर्नुभएको घटनालाई देखिएको छैन, तर सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको नाउँ सबै देश र सबै स्थानहरूमा देखिएको छ। तिनीहरू सबैले सम्‍भव भएको कुनै पनि उपायद्वारा परमेश्‍वरसित सङ्गति गर्न खोज्दै, परमेश्‍वरको इच्छा बुझ्दै र मण्डलीमा सामूहिक रूपमा उहाँको सेवा गर्दै यो पवित्र नाउँ पुकारिरहेका छन्। यो पवित्र आत्माले काम गर्ने अचम्मको तरिका हो।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५१
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५२
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५३
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको, प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरूको “अध्याय २५” बाट
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५४
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर! तपाईंको साथमा सबै थोक मुक्त र स्वतन्त्र छन्; कुनै पनि कठिनाइहरू छैनन्, र सबै थोक सहजताका साथ चलिरहेका छन्! कुनै कुराले पनि तपाईंलाई अवरोध वा विघ्‍‌नवाधा गर्ने आँट गर्दैन, र सबै नै तपाईंसामु समर्पित हुन्छन्। समर्पित नहुने जोकोही मरेर जानेछन्!
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको, प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरूको “अध्याय ३४” बाट
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५५
विघ्‍‌नवाधा उत्पन्न गर्ने र मैले सृजना गरेका अवसरहरूलाई आफ्नै फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने शैतानका दासहरू र दुष्ट आत्माहरूलाई इन्कार गर। तिनीहरूलाई गम्भीर रूपले सीमित र नियन्त्रित गरिनुपर्छ; तिनीहरूलाई धारिलो तरबारले मात्र निराकरण गर्न सकिन्छ। भविष्यका समस्याहरूलाई रोकथाम गर्नको लागि सबैभन्दा दुष्टहरूलाई पूर्ण रूपमा उखेलेर फाल्नुपर्छ। अनि, मण्डली सिद्ध हुनेछ, सबै कुरूपताबाट मुक्त हुनेछ र यो स्वस्थ, जीवनशक्ति र उर्जाले भरिपूर्ण बन्नेछ। बिजुली चम्केपछि, मेघगर्जनको गड्याङगुडुङ गुन्जन्छ। तिमीहरू बेपरवाह बन्नु हुँदैन, र तिमीहरूले हरेस खानु हुँदैन, बरु तिमीहरूले छुटेका कुरा पूरा गर्न आफूले सक्दो गर्नुपर्छ, अनि तिमीहरूले मेरा हातहरूले के गर्छन्, म के प्राप्त गर्न चाहन्छु, म के फाल्न चाहन्छु, म केलाई सिद्ध तुल्याउन चाहन्छु, म केलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न चाहन्छु, म केलाई प्रहार गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा देख्न सक्‍नेछौ—यी सबै कुरा तिमीहरूको आँखैअघि घट्नेछन् अनि तिमीहरूले मेरो सर्वशक्तिमान्‌ता स्पष्ट रूपमा देख्नेछौ।
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको, प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरूको “अध्याय ३५” बाट
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५६
यो पवित्र तुरही हो, र यो गुञ्जिन थालेको छ! यसलाई सुन्। त्यो धेरै सुमधुर आवाज सिंहासनको वाणी हो, जसले समय आएको छ, अन्तिम अन्त्य आएको छ भनी हरेक राष्ट्र र मानिसलाई घोषणा गर्दछ। मेरो व्यवस्थापनको योजना सकिएको छ। मेरो राज्य पृथ्वीमा खुला रूपमा देखिएको छ। संसारका राज्यहरू मेरो राज्य भएका छन्, जो म परमेश्‍वर हुँ। मेरा सात तुरहीहरू सिंहासनबाट गुञ्जिन्छन्, र उदेकका कुराहरू देखा पर्नेछन्! पृथ्वीको अन्तिम छेउहरूबाट मानिसहरू … हिमपहिरोको बल र मेघ गर्जनको शक्तिसँगै हरेक दिशाबाट सँगसँगै हतारिँदै आउनेछन्। …
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको, प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरूको “अध्याय ३६” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५७
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५८
मेरा रहस्यहरू प्रकट भएका छन् र खुला रूपमा प्रदर्शित भएका छन्, र अब लुकेका छैनन्, यो सबै पूर्ण रूपमा मेरो अनुग्रह र कृपाको कारणले भएको हो। यसबाहेक, मेरो वचन मानिसहरूमाझ देखा परेको छ, र यसलाई अब फेरि गुप्त राखिएको छैन, यो पनि मेरो अनुग्रह र कृपाको कारणले भएको हो। म ती सबैलाई प्रेम गर्दछु जसले इमानदारीसाथ आफैलाई मेरो निम्ति समर्पित गर्छन्, र आफैलाई ममा अर्पण गर्छन्। मबाट जन्मेर, पनि मलाई नचिन्‍ने र मेरो विरोध समेत गर्ने सबैलाई म घृणा गर्छु। जो मेरो लागि इमानदार छ म उसलाई त्‍याग्‍नेछैनँ; बरु, म त्यो व्यक्तिका आशिषहरू दोबर गरिदिनेछु। जो अकृतज्ञ छन् र मेरो दयालाई उल्लङ्घन गर्दछन् म तिनीहरूलाई दोबर दण्ड दिनेछु, र म तिनीहरूलाई सजिलै छोड्‌नेछैनँ। मेरो राज्यमा कुनै कुटिलता वा छलकपट छैन, र कुनै सांसारिकता छैन; अर्थात्, त्यहाँ मृतकको कुनै दुर्गन्ध छैन। बरु, सबै विशुद्धता र धार्मिकता छन्; सबै शुद्धता र खुलापन छ, जसमा कुनै कुरा लुकाइएको वा गुप्त राखिएको छैन। सबै कुरा ताजा छन्, सबै थोक रमाइला छन्, र सबै थोक सुधार गर्ने किसिमका छन्। जो कसैसित अझै पनि मृतकको दुर्गन्ध छ त्यो कुनै पनि प्रकारले मेरो राज्यमा रहन सक्दैन, र यसको सट्टामा मेरो फलामको डन्डाले त्योमाथि शासन गरिनेछ। अनादिकालदेखि अहिलेको दिनसम्म सबै अन्त्यहीन रहस्यहरूलाई तिमीहरूको लागि अर्थात् आखिरी दिनहरूमा मद्वारा प्राप्त गरिने मानसिहरूको समूहको लागि पूर्ण रूपमा प्रकट गरिएको छ। के तँ आशिषित महसुस गर्दैनस्? यसको साथै, सबै कुराहरू खुल्लमखुल्ला प्रकट गरिने ती दिनहरू तिमीहरूले मेरो शासनमा साझेदारी गर्ने दिनहरू हुनेछन्।
मानिसहरूको जुन समूहले साँच्चै राजाहरूको रूपमा शासन गर्छन् तिनीहरू मेरो पूर्वनिर्धारति गन्तव्य र छनौटमा निर्भर गर्दछ, र यसमा मानवीय इच्छा रत्तिभर पनि छैन। यसमा भाग लिन हिम्मत गर्ने जोकोहीले मेरो हातको प्रहार सहनुपर्नेछ, र त्यस्ता मानिसहरू मेरो दन्किरहेको आगोमा पर्ने वस्तुहरू हुनेछन्; यो मेरो धार्मिकता र महिमाको अर्को पक्ष हो। म सबै कुरामाथि शासन गर्दछु, म त्यो बुद्धिमान् परमेश्‍वर हुँ जसले पूर्ण अख्तियार प्रयोग गर्दछ, र म कसैप्रति दयालु छैनँ; म पूर्ण रूपमा निष्ठुर छु, व्यक्तिगत भावनाहरूबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित छु। म जोसुकैसँग (चाहे ऊ जत्ति नै राम्ररी बोलोस्, म उसलाई छोड्ने छैनँ) मेरो धार्मिकता, शुद्धता र प्रतापद्वारा व्यवहार गर्दछु, यस अवधिमा सबैलाई मेरा कामहरूको चमत्कार देख्न सक्ने, साथै मेरा कामहरूको अर्थ बुझ्न सक्‍ने तुल्याउँछु। मैले एक-एक गरी दुष्टात्माहरूलाई तिनीहरूले गरेका हरप्रकारका कार्यहरूका लागि दण्ड दिएँ र तिनीहरू प्रत्येकलाई अतल कुण्डमा फ्याँकिदिएँ। यो काम मैले समय सुरु हुनुभन्दा अघि समाप्त गरें, तिनीहरूको निम्ति कुनै स्थिति छोडिनँ, तिनीहरूका निम्ति काम गर्ने कुनै ठाउँ छोडिनँ। मेरो चुनिएका मानिसहरू—मद्वारा पूर्वनिर्धारण गरिएकाहरू र छनौट गरिएकाहरू—कोही पनि कहिल्यै दुष्टात्माद्वारा ग्रस्त हुन सक्दैन, र त्यस्तो सट्टामा, तिनीहरू सधैँ पवित्र रहनेछन्। मैले पूर्वनिर्धारण नगरेका र नचुनेकाहरूलाई चाहिँ म शैतानको हातमा दिनेछु, र तिनीहरूलाई उप्रान्त रहन दिनेछैनँ। सबै पक्षहरूमा, मेरो प्रशासनिक आदेशहरूमा मेरो धार्मिकता र मेरो प्रताप सम्मिलित छन्। जस-जसमा शैतानले काम गर्दछ तिनीहरू एकै जनालाई पनि म छोड्‌नेछैनँ, तर तिनीहरूका शरीरसितै तिनीहरूलाई पातालमा फालिदिनेछु, किनकि म शैतानलाई घृणा गर्दछु। म कुनै पनि प्रकारले त्यसलाई सजिलै बचाउनेछैन, तर त्यसलाई आफ्नो काम गर्ने थोरै मौका समेत नदिइकन पूर्ण रूपमा नाश पार्नेछु। शैतानले केही हदसम्म भ्रष्ट बनाएका व्यक्तिहरू (अर्थात्, विपत्तिमा पर्ने मानिसहरू) मेरो आफ्नै हातको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्थापनअन्तर्गत हुन्छन्। यो शैतानको उग्र क्रोधको परिणाम हो भन्ने नसोच्; यो जान् कि म सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर हुँ, जसले ब्रह्माण्ड र सबै थोकमाथि शासन गर्छ! मैले समाधान गर्न नसक्ने समस्याहरू कुनै पनि छैन, मैले पूरा गर्न नसक्ने काम वा मैल बोल्न नसक्ने कुनै शब्द हुनु त झन् परै जओस्। मानिसले मेरो सल्लाहकारको काम गर्नु हुँदैन। होसियार हो, मेरा हातको प्रहार परी पातालमा खस्लास्। म तँलाई भन्छु! आज मसँग ज-जसले सक्रिय रूपमा सहयोग गर्दैछन् उनीहरू बुद्धिमान् हुन्, र उनीहरू हानि हुनबाट जोगिनेछन् र न्यायको कष्टबाट बच्नेछन्। यी सबै मैले पूर्वनिर्धारण गरेका मेरा प्रबन्धहरू हुन्। आफूलाई अति नै महान् सम्झेर कुनै अविवेकी टिप्पणी नगर् र ठूला-ठूला कुराहरू नगर्। के यो सबै मेरो पूर्वनिर्धारणद्वारा भएका होइनन् र? तँ जो मेरो सल्लाहकार हुन खोज्छस्, तलाईं कुनै सरम नै छैन! तँलाई आफ्नो कद नै थाहा छैन; तँलाई के थाहा यो कति दयनीय रूपमा सानो छ! तैपनि, तँ यो कुनै ठूलो कुरा होइन भनी सोच्छस्, र आफैलाई चिन्दैनस्। बारम्बार, तँ मेरा वचनहरू सुन्न इन्कार गर्छस्, र त्यसरी मेरा कडा मेहनतहरूलाई व्यर्थ बनाउँछस् र ती मेरो अनुग्रह र दयाका अभिव्यक्ति हुन् भनी महसुस नै गर्दैनस्। बरु, तँ बारम्बार आफ्नो चलाखी देखाउने कोसिस गर्छस्। के यो कुरा तँलाई याद छ? आफूलाई त्यति चलाख ठान्ने मानिसहरूले कस्तो दण्ड पाउनुपर्छ? मेरा वचनहरूप्रति उदासीन र अविश्‍वसनीय रहने, र ती वचनहरूलाई आफ्नो हृदयमा नराख्ने, तिमीहरूले यो अनि त्यो गर्न मलाई एउटा बहानाको रूपमा प्रयोग गर्छौ। दुष्कर्मीहरू! तिमीहरू कहिले मेरो हृदयलाई पूर्ण रूपमा विचार गर्न सक्ने हुनेछौ? तिमीहरू यसबारेमा कुनै विचार नै गर्दैनौ, त्यसैले तिमीहरू “दुष्कर्मीहरू” भन्नु तिमीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्नु होइन। यो तिमीहरूलाई एकदमै सुहाउँछ!
कुनै बेला लुकेर रहेका कुराहरूलाई एक-एक गरी आज म तिमीहरूलाई देखाउँदैछु। त्यो ठूलो रातो अजिङ्गर अतल कुण्डमा फालिएको छ र पूर्ण रूपमा नाश पारिएको छ, किनकि त्यसलाई राख्नु कुनै फाइदा छैन; यसको अर्थ, त्यसले ख्रीष्टको सेवा गर्न सक्दैन। यस दिनपछि, राता चीजहरूको कुनै अस्तित्व रहनेछैन; तिनीहरू खिइँदै बिस्तारै नाश हुनेछन्। म जे भन्छु त्यो गर्छु; मानवीय धारणाहरूलाई फाल्; मैले भनेका सबै कुरा मैले गरेको छु। जसले चतुर हुने कोसिस गर्छ उसले आफैमाथि विनाश र घृणा ल्याउँछ, र ऊ जिउन चाहँदैन। त्यसकारण, म तँलाई सन्तुष्ट पार्नेछु, र निश्चित रूपमा त्यस्ता मानिसहरूलाई राख्नेछैन। अबउप्रान्त जनसङ्ख्या सर्वोत्तम रूपमा वृद्धि हुनेछ, तर मसँग सक्रिय सहकार्य नगर्ने सबैलाई बढारेर शून्यतामा पुर्‍याइनेछ। मैले स्वीकृति दिएका व्यक्तिहरू तिनीहरू हुन् जसलाई म सिद्ध पार्नेछु, र म तिनीहरूमध्ये एक जनालाई पनि फाल्नेछैन। मैले भनेको कुरामा कुनै विरोधाभासहरू छैनन्। जसले मसँग सक्रिय सहकार्य गर्दैनन् तिनीहरूले अझ बढी सजाय भोग्नुपर्नेछ, तैपनि अन्त्यमा, म तिनीहरूलाई अवश्य नै मुक्ति दिनेछु। तैपनि त्यतिन्जेलसम्ममा, तिनीहरूको जीवनको हद अति नै फरक हुनेछ। के तँ त्यस्तो व्यक्ति बन्न चाहन्छस्? उठ् र मसँग सहकार्य गर्! मेरो लागि आफूलाई अर्पित गर्नेहरूसित निश्चय पनि म तुच्छ व्यवहार गर्नेछैन। ज-जसले गम्भीरतासाथ आफैलाई ममा समर्पण गर्छन् तिनीहरूलाई म मेरा सबै आशिष्‌हरू प्रदान गर्नेछु। आफैलाई पूर्ण रूपमा ममा अर्पण गर्! तँ जे खान्छस्, तँ जे लगाउँछस्, र तेरो भविष्य सबै मेरो हातमा छ; म सबै कुराको उचित व्यवस्था गर्नेछु ताकि तैँले अनन्त आनन्द पाउन सक्, जुन तैँले प्रयोग गरेर कहिल्यै समाप्त गर्न सक्नेछैनस्। किनकि मैले भनेको छु, “मेरो लागि इमानदारपूर्वक खर्चिनेहरूलाई म अवश्य नै धेरै आशिष्‌ दिनेछु।” मेरो निम्ति आफैलाई इमानदारीसाथ अर्पण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई सबै आशिष्‌हरू प्राप्त हुनेछन्।
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको, प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरूको “अध्याय ७०” बाट
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५९
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरूको “राज्यको स्तुतिगान” बाट
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ६०
मानवजातिको हरेक व्यक्तिले मेरो आत्माद्वारा सूक्ष्म रूपमा जाँचिन स्वीकार गर्नुपर्छ, उसको हरेक वचन र कार्यलाई नजिकबाट निरीक्षण गर्नुपर्छ, यसअलावा मेरा अचम्मका कार्यहरूलाई आदरसाथ हेर्नुपर्छ। पृथ्वीमा राज्यको आगमन हुँदाको समयमा तिमीहरूले कस्तो अनुभूति गर्छौ? जब मेरा छोराहरू र मानिसहरू मेरो सिंहासनतर्फ हूलका हूल अघि बढ्छन्, तब म ठूलो सेतो सिंहासनअघि औपचारिक रूपमा न्यायको आरम्भ गर्नेछु। भन्नुको मतलब, जब मैले स्वयम् उपस्थित भई पृथ्वीमा आफ्नो काम गर्न सुरु गर्छु र जब न्यायको युग अन्त्यतर्फ नजिकिन्छ, तब म मेरा वचनहरूलाई सम्पूर्ण ब्रह्माण्डतर्फ लक्षित गर्छु र मेरो आत्माको वाणीलाई सम्पूर्ण ब्रह्माण्डतर्फ छोडिदिन्छु। मेरा वचनहरूमार्फत, म सबै मानिसहरू र स्वर्ग र पृथ्वीमा रहेका सबै थोकलाई धोइपखाली गरी सफा पार्छु, ताकि यो भूमि अबउप्रान्त फोहोरी र छाडा नहोस्, बरु पवित्र राज्य होस्। म सबै थोकलाई नवीकरण गर्नेछु, ताकि तिनीहरू मेरो प्रयोगको लागि उपलब्‍ध होऊन्, ताकि तिनीहरूले अबउप्रान्त पार्थिव सास नबोकून्, र अबउप्रान्त भुइँको कुनै पनि विशेषताद्वारा दूषित नबनून्। पृथ्वीमा, मानिसले मेरा वचनहरूको लक्ष्य र उत्पत्तिको बारेमा छामछाम-छुमछुम गर्दै खोजी गरेको छ, र मेरा कार्यहरूलाई अवलोकन गरेको छ, तर कसैले पनि कहिल्यै मेरा वचनहरूको उत्पत्तिको बारेमा साँचो रूपमा जानेको छैन र कसैले पनि कहिल्यै मेरा कार्यहरूको आश्‍चर्यपनलाई साँचो रूपमा देखेको छैन। आज मात्रै म व्यक्तिगत रूपमा मानिसमाझ आउँदा र मैले मेरा वचनहरू बोल्दा मानिसले मेरो बारेमा थोरै ज्ञान प्राप्त गरेको छ, र यसरी उसको सोचहरूमा भएको “म” द्वारा ओगटेको स्थान खाली गरेको छ र यसको सट्टामा तिनीहरूको विवेकमा व्यावहारिक परमेश्‍वरको लागि एउटा ठाउँ सृजना गरेको छ। मानिससँग धारणाहरू छन् र ऊ उत्सुकताले भरिपूर्ण छ; कसले पो परमेश्‍वरलाई देख्न चाहँदैनथियो र? कसले पो परमेश्‍वरको सामना गर्न चाहँदैनथियो र? तैपनि मानिसहरूको हृदयमा ठाउँ ओगट्ने एउटै कुरो भनेको मानिसले अस्पष्ट र अमूर्त ठान्ने परमेश्‍वर हो। यदि मैले स्पष्टसित नबताएको भए, कसले पो यो कुरा महसुस गर्न सक्थ्यो र? कसले पो म वास्तवमै अस्तित्वमा छु भनेर निश्चयताका साथ र कुनै पनि शङ्काविना साँचो रूपमा विश्‍वास गर्थ्यो र? मानिसको हृदयमा भएको “म” र वास्तविकताको “म” बीचमा धेरै ठूलो भिन्नता छ, र कसैले पनि तिनीहरूको बीचमा तुलना गर्न सक्दैन। यदि म देह नबनेको भए, मानिसले कहिल्यै पनि मलाई चिन्दैनथ्यो, र उसले मलाई चिनेको नै भने पनि, के त्यस्तो ज्ञान अझै धारणा नै हुँदैनथियो र? हरेक दिन म मानिसहरूको अटुट प्रवाहमाझ हिँड्छु, र हरेक दिन म हरेक व्यक्तिभित्र कार्य सञ्चालन गर्छु। जब मानिसले मलाई साँचो रूपमा देख्छ, तब उसले मेरा वचनहरूमा मलाई चिन्न सक्नेछ, र मैले जुन साधनहरूमार्फत बोल्छु ती साधनहरूका साथै मेरा अभिप्रायहरूको बारेमा बोध गर्नेछ।
जब राज्य औपचारिक रूपमा पृथ्वीमा आइपुग्छ, तब सबै थोकमाझ केचाहिँ चुपचाप रहँदैन र? सबै मानिसहरूमाझ कोचाहिँ डराउँदैन र? म ब्रह्माण्डरूपी संसारभरि जताततै हिँड्छु, र हरेक कुरालाई मैले व्यक्तिगत रूपमा बन्दोबस्त गरेको छु। यस समयमा, कसलाई मेरा कामहरू अद्भुत छन् भनी थाहा छैन र? मेरा हातहरूले सबै थोकलाई थाम्छन्, तैपनि म सबै थोकभन्दा माथि छु। आज, के मानिसको बीचमा भएको मेरो देहधारण र मेरो व्यक्तिगत उपस्थिति मेरो विनम्रता र लुप्तपनको साँचो अर्थ होइन र? बाह्य रूपमा, धेरै मानिसहरूले मलाई असल भनी सराहना गर्छन् र मलाई सुन्दर भनी प्रशंसा गर्छन्, तर कसले मलाई साँचो रूपमा चिन्छ र? आज, मैले किन तिमीहरूलाई मलाई चिन भनी भनिरहेको छु त? के मेरो उद्देश्य ठूलो रातो अजिङ्गरलाई सर्ममा पार्नु होइन र? म मानिसलाई मेरो प्रशंसा गर्न बाध्य पार्न चाहन्न, बरु म उसलाई मलाई चिन्न लगाउन चाहन्छु, जसमार्फत उसले मलाई प्रेम गर्नेछ र यसरी मेरो प्रशंसा गर्नेछ। त्यस्तो प्रशंसाचाहिँ प्रशंसा भन्न लायक हुन्छ, र त्यो खोक्रो कुराकानी हुँदैन; त्यस्तो प्रशंसा मात्र मेरो सिंहासनसम्म आइपुग्छन् र आकाशतिर उचालिन्छन्। मानिसलाई शैतानले परीक्षा लिएको र भ्रष्ट तुल्याएको छ, उसले धारणा र सोचहरू अपनाएको छ, त्यसैले सारा मानवजातिलाई विजय गर्नको लागि, मानिसका सबै धारणाहरूलाई खुलासा गर्नको लागि, र मानिसका सोचहरूलाई च्यात्नको लागि म देह बनेको छु। परिणामस्वरूप, मानिस मेरो अगाडि पहिले झैँ अहिले हिँड्दैन, उसले पहिले झैँ अहिले उसका आफ्नै धारणाहरू प्रयोग गरी मेरो सेवा गर्दैन, र यसरी मानिसको धारणाहरूको “म” पूर्ण रूपमा हराएको छ। जब राज्य आउँछ, तब मैले गर्ने सबैभन्दा पहिलो काम भनेको कामको यो चरणलाई सुरु गर्नु हो र म मेरा मानिसहरूमाझ यस्तो काम गर्छु। ठूलो रातो अजिङ्गरको देशमा जन्मेका मेरा मानिसहरूको रूपमा, तिमीहरूभित्र निश्चय नै त्यो ठूलो रातो अजिङ्गरको विषको अलिकति वा एक भाग मात्र पनि छैन। त्यसैले, मेरो कामको यो चरण प्राथमिक रूपमा तिमीहरूमा केन्द्रित छ, र चीनमा मेरो देहधारण हुनुको महत्त्वको एउटा पक्ष यही हो। धेरैजसो मानिसहरूले मैले बोल्ने वचनहरूको सानो टुक्रालाई समेत बुझ्न सक्दैनन्, जब तिनीहरूले बुझ्छन्, तब तिनीहरूको बुझाइ धमिलो र भ्रमपूर्ण हुन्छ। यो मैले बोल्ने शैलीको परिवर्तनको निर्णायक मोड हो। यदि सबै मानिसहरूले मेरा वचनहरू पढ्न र तिनका अर्थहरू बुझ्न सक्‍ने भए त, मानिसमाझ कसलाई मुक्ति दिन, र नरकमा नफाल्न सकिन्थ्यो र? जब मानिसले मलाई चिन्छ र मेरो आज्ञा पालन गर्छ, त्यो समय मैले विश्राम गर्ने समय हुनेछ र त्यही समय मानिसले मेरा वचनहरूको अर्थ बुझ्न सक्षम भएको समय पनि हुनेछ। आज, तिमीहरूको कद अति सानो छ—यो दयनीय रूपमा सानो छ, उचाल्न पनि लायक छैन—मेरो बारेमा तिमीहरूको ज्ञानको त कुरै नगरौं।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ६१
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ६२
सारा ब्रह्माण्डका मानिसहरूले मेरो आगमनको दिनको उत्सव मनाउँछन्, र स्वर्गदूतहरू मेरा सबै मानिसहरूको बीचमा हिँड्छन्। जब शैतानले समस्या उत्पन्न गर्छ, तब स्वर्गदूतहरूले स्वर्गमा तिनीहरूले गर्ने सेवाको कारण सधैं मेरा मानिसहरूलाई सहयोग गर्छन्। तिनीहरूले मानव कमजोरीका कारण दियावलसद्वारा धोका खाँदैनन् बरु अन्धकारका शक्तिहरूको ठूलो आक्रमणको कारणले कुहिरो पार गर्दै मानिसको जीवनको अनुभव गर्न अझ बढी कोसिस गर्छन्। मेरा सबै मानिसहरू मेरो नाममुनि समर्पित हुन्छन्, कोही पनि खुल्लमखुल्ला मेरो विरुद्धमा उत्रदैन। स्वर्गदूतहरूको मेहनतको कारण मानिस मेरो नाम स्वीकार गर्छन्, र सबै मेरो कार्यप्रवाहको बीचमा रहन्छन्। संसार पतन भइरहेको छ! बेबिलोन पक्षाघात भएको छ! ओ, धार्मिक संसार! पृथ्वीमा मेरो अख्तियारद्वारा कसरी यो नष्ट हुन सक्दैन? कसले अझै मेरो आज्ञा पालन नगर्ने र मेरो विरोध गर्ने हिम्मत गर्छ? शास्त्रीहरूले? हरेक धार्मिक अधिकारीहरूले? पृथ्वीमा भएका शासक र अधिकारीहरूले? स्वर्गदूतहरूले? कसले मेरो शरीरको सिद्धता र पूर्णताको उत्सव मनाउँदैन? सबै मानिसहरूमध्ये, कसले निरन्तर मेरो प्रशंसा नगर्ला, को लगातार आनन्दित नहोला? म ठूलो रातो अजिङ्गरको गुफा भएको देशमा बस्छु, तैपनि यसले मलाई डरले काम्ने वा भाग्ने बनाउँदैन, किनकि यहाँका सबै मानिसहरूले यसलाई घृणा गर्न थालेका छन्। कुनै कुराले पनि अजिङ्गरको अगाडि अजिङ्गरकै लागि कहिल्यै आफ्नो “कर्तव्य” गरेको छैन; यसको सट्टामा, सबै कुराले तिनीहरूलाई जे उचित लाग्छ त्यो गरेका छन्, र हरेकले आफ्नै बाटोमा हिँडेको छ। पृथ्वीका देशहरू कसरी विनाश हुन सक्दैनन्? पृथ्वीका देशहरू कसरी पतन हुन सक्दैनन्? मेरा मानिसहरू कसरी आनन्दित हुन सक्दैनन्? तिनीहरूले कसरी खुसीले गाउन सक्दैनन्? के यो मानिसले गरेको काम हो? के यो मानिसका हातहरूले गरेको काम हो? मैले मानिसलाई उसको अस्तित्वको जड दिएँ, र उसको निम्ति भौतिक वस्तुहरू जुटाइदिएँ, तैपनि ऊ आफ्नो वर्तमान अवस्थासँग असन्तुष्ट छ र मेरो राज्यमा प्रवेश गर्न बिन्ती गर्छ। तर ऊ कुनै मूल्य नचुकाई, उसको निःस्वार्थ भक्ति चढाउन तयार नभई त्यत्ति सजिलै कसरी मेरो राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ? मानिसबाट कुनै कुरा लिनुको सट्टा, म ऊसले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डहरू तय गर्छु, ताकि पृथ्वीमा मेरो राज्य महिमाले भरियोस्। मानिस मद्वारा डोऱ्याइएर आजको युग आइपुगेको छ, ऊ यस अवस्थामा अस्तित्वमा छ, र ऊ मेरो ज्योतिको मार्गनिर्देशनमाझ जिउँछ। यदि यस्तो हुँदैनथ्यो भने, पृथ्वीका मानिसहरूमध्ये कसलाई आफ्ना सम्भाव्यताहरू थाहा हुनेथियो र? कसले मेरो इच्छा बुझ्नेथियो? म मानिसहरूको लागि तय गरिएका मापदण्डहरूमा मेरा प्रबन्धहरू थपिदिन्छु; के यो प्रकृतिको नियमअनुरूप छैन र?
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ६३
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ६४
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ६५
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ६६
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ६७
म सर्वोच्च स्वर्गलाई मेरा कार्यहरूको ‍प्रकटीकरणद्वारा भर्नेछु र पृथ्वीका सबै थोकलाई मेरो शक्तिसामु लम्पसार पर्न लगाउनेछु, यसरी “विश्‍व एकता” को लागि मेरो योजना कार्यान्वयन गर्नेछु र मेरो यो चाहनालाई सफलतामा पुर्‍याउनेछु, ताकि मानवजाति अबउप्रान्त पृथ्वीमा “यताउता भौंतरिने” छैनन्, बरु तिनीहरूले कुनै ढिलाइ नगरिकन सुहाउँदो गन्तव्य भेट्नेछन्। म हरेक किसिमले मानव जातिको लागि सोचविचार गर्छु, यस्तो गर्नेछु ताकि सारा मानवजाति चाँडै नै शान्ति र खुसीको भूमिमा जिउन आऊन्, ताकि तिनीहरूका जीवनका दिनहरू अबउप्रान्त दुःखी र उजाड नहोऊन्, र ताकि पृथ्वीमा मेरा योजना शून्यतामा नपुगोस्। मानिस त्यहाँ अस्तित्वमा रहने भएकोले, म मेरो राष्ट्र पृथ्वीमा निर्माण गर्नेछु, किनभने मेरो महिमाको प्रकटीकरणको एक अंश पृथ्वीमा रहेको छ। माथि स्वर्गमा, म मेरो सहरलाई उचित तुल्याउनेछु र त्यसरी नै माथि र तलका सबै थोकलाई नवीन बनाउनेछु। म स्वर्गको माथि र तल अस्तित्वमा रहेका सबै थोकलाई एकतामा ल्याउनेछु ताकि, पृथ्वीका हरेक थोक स्वर्गमा भएका सबै थोकसँग एकीकृत होस्। यो मेरो योजना हो; अन्तिम युगमा मैले हासिल गर्ने उपलब्धि नै यही हो—मेरो कामको यो भागमा कसैलाई पनि हस्तक्षेप नगरोस्! अविश्वासी राष्ट्रहरूमाझ मेरो कामलाई फैलाउनु नै पृथ्वीमा मैले गर्ने मेरो कामको अन्तिम भाग हो। मैले गर्ने कामलाई कसैले पनि बोध गर्न सक्दैन, र यही कारणले गर्दा, मानिसहरू निकै नै भ्रममा परेका छन्। अनि म पृथ्वीमा मैले गर्ने मेरो काममा पूरै व्यस्त भएको हुनाले, मानिसहरूले यसलाई “खेल खेल्ने” अवसर बनाउँछन्। तिनीहरूलाई अत्यन्तै उपद्रवी बन्नबाट रोक्नको लागि, मैले तिनीहरूलाई अग्निकुण्डको अनुशासन कारबाही सहन गर्नको लागि मेरो सजायअन्तर्गत राखेको छु। यो मेरो कामको एउटा चरण हो, र म मेरो कामको यो चरणलाई पूरा गर्नको लागि उक्त अग्निकुण्डको सामर्थ्य प्रयोग गर्नेछु; अन्यथा, मेरो कामलाई अघि बढाउन नै असम्भव हुन्छ। म सारा ब्रह्माण्डभरिका मानवजातिलाई मेरो सिंहासनअघि समर्पित हुन लगाउनेछु, मेरो न्यायअनुरूप तिनीहरूलाई विविध श्रेणीमा विभाजन गर्नेछु, ती श्रेणीहरूअनुसार तिनीहरूलाई वर्गीकरण गर्नेछु, र अझै तिनीहरूलाई तिनीहरूको परिवारमा विभाजन गर्नेछु, ताकि सम्पूर्ण मानवजातिले मलाई अवज्ञा गर्न छाडून्, यसको साटो तिनीहरू मैले नामाकरण गरेका श्रेणीहरूअनुसार स्पष्ट र व्यवस्थित बन्दोबस्तमा रहून्—कोही पनि यतिकै जहीँतहीँ चलफिर नगरोस्! सारा ब्रह्माण्डभरि नै मैले नयाँ काम गरेको छु; सारा ब्रह्माण्डभरि नै मेरो आकस्मिक देखा पराइबाट सारा मानवजाति अचम्‍मित र अक्क न बक्क भएका छन्, र मेरो देखा पराइद्वारा खुला अन्तरिक्षमा तिनीहरूको क्षितिज बृहत् रूपमा विस्तारित भएको छ। के आज यस्तै त छ नि होइन र?
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरूको “अध्याय ४३” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ६८
मैले मेरो काम गैरयहूदी जातिहरू माझ फैलाउँदैछु। मेरो महिमा सारा ब्रह्माण्डभरि चम्किनेछ; मेरो इच्छा साना-ठूला सबै मानिसहरूमा साकार हुनेछ, सबै मेरो बाहुलीद्वारा परिचालित हुन्छन् र मैले निर्धारण गरेका कामहरू फैलाउँछन्। यस घड़ीदेखि, सबै मानिसहरूलाई अर्कै संसारमा ल्याएर म नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छु। जब म आफ्नो “गृह मुलुक” फर्कें; मेरो मौलिक योजनामा मैले अर्को नयाँ कामको सुरुवात गरेँ, ताकि मानिस मकहाँ अझ गहन रूपमा आउन सकून्। मैले ब्रह्माण्ड यसको समग्रतामा विचार गर्छु र त्यसलाई हेर[क] यो मेरो कामको निम्ति उपयुक्त समय हो, त्यसैले मानिसमाझ मेरो काम गर्दै म यताउता दौड़धुप गर्छु। आखिर, यो नयाँ युग हो र धेरैभन्दा धेरै नयाँ मानिसहरूलाई नयाँ युगमा लिन र मैले दूर गर्नेहरूमध्ये धेरैलाई पन्छाउन मैले नयाँ काम ल्याएको छु। रातो अजिङ्गरको राष्ट्रमा, तिनीहरूलाई हावामा नै बहन लगाएर, मैले मानवजातिमा अथाह कामको एउटा चरण पूरा गरेको छु, त्यसपछि तिनीहरू बिस्तार-बिस्तार हावाको बहाउसँगै अलग हुन्छन्। साँच्चै, यो मैले सफा गर्न लागेको “खलो” हो; मैले उत्कट चाह गरेको कुरा यही हो र यो पनि मेरो योजना हो। म काममा हुँदा धेरै दुष्टहरू गुप्‍त रूपमा पसेका छन्, तर म तिनीहरूलाई धपाउन हतारमा छुइनँ। बरु, उपयुक्त समयमा म तिनीहरूलाई तितरबितर पार्नेछु। त्यसपछि मात्र, मलाई साँच्चै प्रेम गर्नेहरूलाई अञ्जिरको फल र लिलिको बास्ना प्राप्‍त गर्न दिएर म जीवनको मूल हुनेछु। शैतान डेरा बस्ने मुलुकमा, कुनै विशुद्ध सुन रहँदैन, त्यहाँ केवल बालुवा मात्र हुन्छ, यी परिस्थितिहरूको सामना गरेपछि म यस्तो चरणको काम गर्छु। मैले प्राप्‍त गर्ने कुरा भनेको शुद्ध र खारिएको सुनको बालुवा होइन भन्ने तिमीहरूले जान्नुपर्छ। मेरो घरमा दुष्ट कसरी रहन सक्छ? फ्याउराहरू मेरो स्वर्गमा परजीवी हुन मैले कसरी दिन सक्छु र? यी कुराहरूलाई पाखा लगाउन मैले कल्पना गर्न सकिने सबै विधिहरू अप्नाउछु। मेरो इच्छा प्रकट हुन अघि मैले के गर्न लागेको छु सो कसैलाई पनि अवगत हुँदैन। यही मौका छोपेर मैले ती दुष्टहरूलाई धपाउनेछु र तिनीहरू मेरो उपस्थितिबाट जान बाध्य हुन्छन्। मैले दुष्टहरूलाई यसो गर्नेछु, तर तिनीहरूले मेरो सेवा गर्ने दिन अझै हुनेछ। आशिष्‌ पाउने मानिसहरूको इच्छा अत्यन्त प्रबल हुन्छ; यसकारण मैले मेरो शरीर घुमाएर मेरो महिमित मुहार गैरयहूदीहरूलाई देखाउँछु, ताकि मानिसहरू तिनीहरूको आफ्नै संसारमा जिऊन् र मैले भन्नुपर्ने मेरा वचनहरू मैले भन्दै जाँदा र मानिसहरूलाई चाहिने कुरा आपूर्ति गर्दै जाँदा तिनीहरूले आफ्नो न्याय आफै गरून्। मानिसहरू तिनीहरूको होशमा आउँदा मैले मेरो काम लामो समय अघिदेखि नै फैलाएको हुनेछु। त्यसपछि मैले मानिसहरूलाई मेरो इच्छा व्यक्त गर्नेछु र सबै मानिसहरूले मेरो काममा समन्वय गर्ने गरी नजिकबाट मलाई पछ्याउन दिएर र मैले गर्नुपर्ने सबै काम मसँगै तिनीहरूको आफ्नै क्षमतामा गर्न दिएर मानिसहरूमाझ मेरो कामको दोस्रो भाग सुरु गर्नेछु।
क. मूल पाठमा “त्यसलाई हेर” भन्ने वाक्यांश समावेश छैन।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ६९
मेरो महिमा देख्न तिनीहरू कसैसँग विश्‍वास छैन र म तिनीहरूलाई बाध्य बनाउँदिनँ, बरु मानवजातिको माझबाट मेरो महिमा हटाउनेछु र यसलाई अर्कै संसारमा लैजान्छु। जब मानिसहरूले एक पटक पश्‍चाताप गर्छन्, तब मैले मेरो महिमा लिनेछु र यो मैले विश्‍वास भएकाहरूलाई देखाउनेछु। मैले काम गर्ने सिद्धान्त यही हो। किनभने मेरो महिमाले कनान छोड्ने समय छ र मेरो महिमाले चुनिएकाहरूलाई छोड्ने समय पनि छ। यसको अतिरिक्त, मेरो महिमाले पृथ्वी छोड्ने, यसलाई मधुरो गराउने र यसलाई अन्धकारमा डुब्ने एउटा समय छ। कनानको मुलुकले पनि सूर्यको उज्यालो देख्नेछैन; सबै मानिसहरूले विश्‍वास गुमाउनेछन्, तर कनानको मुलुकको सुगन्ध कसैले पूर्ण रूपमा सहन सक्दैनन्। जब म नयाँ स्वर्ग र पृथ्वीभित्र जान्छु, तब मैले मेरो महिमाको अर्को भाग लिन्छु र सारा पृथ्वीलाई धपक्क पार्ने गरी ज्योतिको चमक पैदा गरेर यसलाई पहिले कनानको मुलुक प्रकट गर्छु, र रातको निस्पट्ट अन्धकारलाई डुबाएर सारा पृथ्वीलाई ज्योतिमा आउन दिन्छु। मेरो महिमालाई हरेक जातिमा नयाँ देखाउन र वृद्धि गर्न, सारा पृथ्वीका मानिसहरूलाई ज्योतिको शक्तिबाट सामर्थ्य लिन आउन देओ। म मानव संसारमा आएको लामो समय भइसक्यो र मेरो महिमालाई इस्राएलबाट पूर्वतिर लामो समय अघि नै ल्याइएको छ; किनभने मेरो महिमा पूर्वबाट चम्किन्छ, जहाँ यसलाई अनुग्रहको युगदेखि यस दिनसम्म ल्याइएको थियो भन्ने कुरा सारा मानवजातिले महसुस गरोस्। तर म इस्राएलबाट निस्केको थिएँ कि म पूर्वमा आइपुग्न सकूँ। जब पूर्वको ज्योति क्रमशः सेतो हुँदै जान्छ तब पृथ्वीको अँध्यारो ज्योतिमा परिणत हुन थाल्छ अनि मात्र म लामो समय अघि नै इस्राएलबाट गएको थिएँ र म पूर्वमा नयाँ भएर उदाइरहेको छु भन्ने मानिसले पत्ता लगाउनेछन्। एक पटक इस्राएलमा ओर्लेर पछि यसबाट प्रस्थान गरेँ, म फेरि इस्राएलमा जन्मन सक्दिनँ, किनभने मेरो कामले सारा ब्रह्माण्डलाई नै डोर्‍याउँछ। यसको अतिरिक्त, बिजुली पूर्वदेखि पश्‍चिमसम्म नै चम्किन्छ। यसैले, म पृथ्वीमा ओर्लेको छु, र कनानलाई पूर्वका मानिसहरूकहाँ ल्याएको छु। मैले सारा पृथ्वीभरिका मानिसहरूलाई कनानमा ल्याउन चाहन्छु, त्यसैले सारा ब्रह्माण्डलाई वशमा पार्न, मैले कनानको मुलुकमा अभिव्यक्तिको विषय ल्याइरहन्छु। यस बेला, कनानको मुलुकमा बाहेक पृथ्वीमा कुनै ज्योति छैन, सबै मानिसहरू भोक र ठण्डाको जोखिममा छन्। मैले मेरो महिमा इस्राएललाई दिएँ, अनि यसबाट लिएँ, पछि मैले इस्राएलीहरूलाई र सारा मानवजातिलाई पूर्वतिर ल्याएँ। तिनीहरूको ज्योतिसँग पुनर्मिलन होस् भनेर, यससँगै होस् र यसलाई खोज्न नपरोस् भनेर मैले तिनीहरू सबैलाई प्रकाशमा ल्याएको छु। खोजिरहनेहरू सबैलाई मैले फेरि ज्योति देख्न दिनेछु र मसँग इस्राएलमा भएको महिमा देख्नेछन्; मैले तिनीहरूलाई लामो समय अघि नै मानवजातिको माझमा सेतो बादल तल गएको कुरा देख्ने दिनेछु, तिनीहरूले कैयौँ सेता बादलहरू र तिनीहरूको झुप्पाहरूमा प्रशस्त फलहरू देखून्; यसको अतिरिक्त, तिनीहरूले इस्राएलको यहोवा परमेश्‍वर देखून्। मैले तिनीहरूलाई यहूदीहरूको मालिक, चाह गरिएको मसीहको र सारा युगहरूभरि राजाहरूले सताएका मेरो पूर्ण देखा पर्ने घटना हेर्न दिनेछु। अन्तका दिनहरूमा मेरो सारा महिमा र मेरा सबै कामहरू मानिसलाई प्रकट गर्दै मैले सारा ब्रह्माण्डभरि काम गर्नेछु र म ठूल-ठूला काम गर्नेछु। मैले मलाई वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरिरहेकाहरू, म सेतो बादलमा आएको उत्कट चाह गर्नेहरूलाई, म पटक-पटक देखा परेको उत्कट चाह गर्ने इस्राएललाई, र मलाई सताउने सबै मानवजातिलाई म मेरो महिमित मुहार देखाउनेछु, ताकि मैले मेरो महिमा उहिले नै लिएको छु र मैले पूर्वतिर ल्याएको छु; त्यसैले यो अब यहूदियामा छैन। किनभने अन्तको दिन अघि नै आइसकेको छ!
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ७०
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ७१
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ७२
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ७३
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ७४
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ७५
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ७६
अघिल्लो: १. कार्यका तीन चरणहरू
अर्को: ३. आखिरी दिनहरूको न्याय